Epic Mitambo 'Nyore Anti-Cheat sevhisi ikozvino inowirirana neLinux uye Mac | Kubva kuLinux
Epic Mitambo 'Nyore Anti-Cheat sevhisi ikozvino inowirirana neLinux neMac
Darkcrizt | 23/09/2021 10:28 | Mitambo, Noticias
Pakutanga gore rino, Easy Anti-Cheat yeWindows yakaitwa kuti iwanikwe kune vese vagadziri mahara uye kubva munaGunyana 23, Epic Pamhepo Services yakawedzera rutsigiro kuLinux neMac yevagadziri vanochengeta zvizere zvevhezheni vhezheni yemitambo yavo yeaya mapuratifomu.
Uye ndezvekuti muna Chikumi, Epic Mitambo yakaparura yemahara izwi yekutaura uye anti-kubiridzira masevhisi kuti vagadziri vanogona kushandisa mumitambo yavo. Aya masevhisi anopiwa sechikamu cheiyo studio's Epic Online Services suite, iyo inogona kushandiswa nechero injini yemitambo uye inoenderana neWindows, Mac, Linux, PlayStation, Xbox, Nintendo Shandura, iOS, uye Android.
Kunge mamwe masevhisi akaverengerwa muEOS SDK, izwi rekutaurirana chinhu rakamboshandiswa pakutanga muEpic inozivikanwa Hondo Royale mutambo. Izwi rekutaura sevhisi iri muchinjika-chikuva uye inotsigira yega uye yeboka yekukurukurirana mumakamuri ehurukuro uye panguva yemitambo machisa.
Paunenge uchishandisa sevhisi, data rezwi rinotapurirana kuburikidza nemaseva makuru eEpic uye tekinoroji inobata kuyerwa kwese uye QoS. Epic inoti iyo tekinoroji yatove "yakabatanidzwa uye kurwisa-kuyedzwa muFortnite," ichiona kuti inogona kubata mamirioni evatambi kamwechete.
Pamusoro pekutaura nenzwi, Epic Online Services inowedzerawo rutsigiro rweEasy Anti-Cheat, sevhisi yakagadzirirwa kubvisa cheats uye kutanga kubva pamitambo yepamhepo. Easy Anti-Cheat yaimbovepo kune yechitatu-bato vanogadzira marezinesi emitambo yavo, asi izvozvi vakasununguka sechikamu cheEpic Online masevhisi uye inofanirwa kubvumidza vazhinji vanogadzira kuti vatore mukana wavo.
Epic inopokana kuti anti-cheat software seiyi iri kuwedzera kukosha Sezvo mimwe mitambo ichipa kuyambuka-kutamba pakati pePC nemamwe mapuratifomu, sezvo kubiridzira kunowanzo kuwanikwa paPC.
Kunge mamwe anti-kubiridzira software, Easy Anti-Cheat dzimwe nguva inogona kukonzera matambudziko kune asiri-kubiridzira uye kunyora isina mhosva software seye malware. Naizvozvo, iri kure nekuva mhinduro yakakwana. Asi nekubiridzira kuri kutambudza mazhinji emitambo mikuru yepasirese, zvakaoma kupokana nevagadziri vane chimwe chishandiso mudura ravo.
Epic inosanganisira ese masevhisi sechikamu cheayo Epic suite yepamhepo masevhisi, ivo havana kubatana neyavo injini injini kana chitoro. Mune inowanzo bvunzwa mibvunzo yeyako saiti; iyo kambani yakati iri kupa masevhisi emahara "mukuyedza kukurudzira kubvumidzwa kwakakura kweese maEpiic zvipo" uye kugadzira hombe account account kune iyo kambani pamwe neyaanoshanda mapuratifomu.
Uku kuita kunowedzera Easy Anti-Kubiridzira kune iyo runyorwa rwezvishandiso izvo vanozogonesa kuwana. sechikamu cheEpic Online Services SDK. Epic yakatenga iyo Helsinki-based kambani yakagadzira software muna 2018 uye inoshandisa anti-cheat solution muFortnite. Kune mazana emimwe mitambo iyo zvakare inoshandisa iyo software kuchengetedza kubiridzira kunze, kusanganisira Mediatonic's Fall Guys, iyo yakatambura nedambudziko rakakura rekubiridzira.
Vagadziri vanozokwanisa kuongorora uye nekumisikidza anti-kubiridzira matanho yemutambo wako nerubatsiro rwe software. Uye sezvo Epic inoronga kupa Easy Anti-Cheat neyakaenderera inogadziridza, vagadziri vemitambo vanove nekwanisi yekudzivirira vane utsinye vatambi kutora chikamu kunyangwe sevanyengeri vanoshanduka kunzvenga kuonekwa.
Izvo zviri kutaurwa, software haina kukwana uye dzakasiyana mitambo yepamhepo inoishandisa ichiri kunetsekana nevanobiridzira. Zvichienderana nedhata rakaunganidzwa neSurfshark VPN mwedzi mishoma yapfuura, semuenzaniso, Fortnite yaive nekatatu kuwedzerana zvine chekuita nezve YouTube maonero (26,822,000 maonero kuti ave chaiwo) kupfuura Overwatch, munzvimbo yechipiri. Kunyangwe asiri munhu wese aiona aya mavhidhiyo eYouTube akabiridzira,
"Epic Online Services iripo yekubatanidza vanogadzira uye vatambi pane ese mapuratifomu, kusanganisira iri kuuya Steam Deck, uye isu tinofara kuzviita. Imwe nhanho mune ino nongedzo. «
Pakutanga gore rino, Easy Anti-Cheat mitambo yeWindows yakaitwa kuti iwanikwe kune vese vagadziri mahara. Nhasi tiri kuwedzera rutsigiro kuLinux neMac kune vanogadzira avo vanochengeta zvizere mavhezheni emitambo yavo yemapuratifomu aya. «
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Mitambo » Epic Mitambo 'Nyore Anti-Cheat sevhisi ikozvino inowirirana neLinux neMac
Cloud Computing: Izvozvi Yakavhurwa Sosi Zvishandiso uye Mapuratifomu
Fedora Silverblue: Inonakidza Isingachinjiki Desktop Inoshanda Sisitimu